Cyborgs (2017) | MM Movie Store
ကိုယျနှဈသကျတဲ့လူတဈယောကျကိုပိုငျဆိုငျဖို့ဆိုရငျအဲ့ဒီလူရဲ့ အဓိကနရောဖွဈတဲ့ နှလုံးသား အလယျဗဟိုတညျ့တညျ့ ခြိနျရှယျပဈခပျသိမျးပိုကျဖို့လိုပါတယျ…ဒီလိုပဲ စဈပှဲတဈပှဲမှာဆိုလညျး အောငျမွငျရေးသော့ခကျြဖွဈတဲ့ အဓိကအခကျြအခြာမွကေို သိမျးပိုကျဖို့ ကွိုးစားကွပါတယျ…
ယူကရိနျးနိုငျငံကDonetskလဆေိပျကိုရုရှားတှလောရောကျတိုကျခိုကျနကွေတယျ….အဲ့လဆေိပျကိုဘာလို့တိုကျရလဲဆိုတော့ အထကျကပွောခဲ့သလို အခကျြအခြာမွနေရောဖွဈနလေို့ပါပဲ…ဒီလဆေိပျကသြှားရငျ ယူကရိနျးကသြှားတာနဲ့တူတူပဲဖွဈနလေို့ပါ…
ဒါ့ကွောငျ့ ယူကရိနျးတို့ ဒီလဆေိပျမကသြှားဖို့အရေးကိုစဈသညျအပေါငျးတို့ဟာ တတျစှမျးသမြှ အတတျနိုငျဆုံးခုခံဖို့ကွိုးစားကွပါတယျ…ဒီစဈသညျတှေ အောငျမွငျပါ့မလား…
အသကျပေါငျးမြားစှာ ဘယျလောငျတောငျပေးဆပျလိုကျကွရလဲ….သူရဲကောငျးတှဟော ဘယျသူမြားဖွဈမလဲ….
စဈကားကောငျးကွိုကျသူတို့ လကျမလှတျသငျ့ပါကွောငျး ညှနျးဆိုပါရစေ…ဒီကားကတော့ ယူကရိနျးစဈကားတဈကားဖွဈပွီးပွီးတော့ အောငျမွငျမှုတှလေညျးရသလိုIMDb မှာဆိုလညျး 8.3တောငျရထားလတေော့ ထှထှေထေူးထူးတော့ပွောစရာလိုမယျမထငျပါဘူး…ခံစားကွညျ့လိုကျဦးဗြို့…
ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ အဓိကနေရာဖြစ်တဲ့ နှလုံးသား အလယ်ဗဟိုတည့်တည့် ချိန်ရွယ်ပစ်ခပ်သိမ်းပိုက်ဖို့လိုပါတယ်…ဒီလိုပဲ စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာဆိုလည်း အောင်မြင်ရေးသော့ချက်ဖြစ်တဲ့ အဓိကအချက်အချာမြေကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်…
ယူကရိန်းနိုင်ငံကDonetskလေဆိပ်ကိုရုရှားတွေလာရောက်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်….အဲ့လေဆိပ်ကိုဘာလို့တိုက်ရလဲဆိုတော့ အထက်ကပြောခဲ့သလို အချက်အချာမြေနေရာဖြစ်နေလို့ပါပဲ…ဒီလေဆိပ်ကျသွားရင် ယူကရိန်းကျသွားတာနဲ့တူတူပဲဖြစ်နေလို့ပါ…
ဒါ့ကြောင့် ယူကရိန်းတို့ ဒီလေဆိပ်မကျသွားဖို့အရေးကိုစစ်သည်အပေါင်းတို့ဟာ တတ်စွမ်းသမျှ အတတ်နိုင်ဆုံးခုခံဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်…ဒီစစ်သည်တွေ အောင်မြင်ပါ့မလား…
အသက်ပေါင်းများစွာ ဘယ်လောင်တောင်ပေးဆပ်လိုက်ကြရလဲ….သူရဲကောင်းတွေဟာ ဘယ်သူများဖြစ်မလဲ….
စစ်ကားကောင်းကြိုက်သူတို့ လက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်း ညွှန်းဆိုပါရစေ…ဒီကားကတော့ ယူကရိန်းစစ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီးပြီးတော့ အောင်မြင်မှုတွေလည်းရသလိုIMDb မှာဆိုလည်း 8.3တောင်ရထားလေတော့ ထွေထွေထူးထူးတော့ပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး…ခံစားကြည့်လိုက်ဦးဗျို့…
9-1-1: Lone Star (Season1)၊ အပိုငျး (၁)
(James Bond) Live and Let Die (1973)
Natalie – Link 1